Degdeg: Askar Mareykan Iyo Kuwa Soomaali Ah oo Sheekh Caan Ahaa Ku Dilay Degmada Wanlaweyn. – Shabakadda Amiirnuur
October 9, 2018 8:19 am by admin Views: 55
Degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha hoose waxaa ka dhacday arrin ay si aad ah ula yaabeen dadka shacabka ah kadib markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa Danab ee uu isagu tababartay ay habeenkii xalay gurigiisa oo magaalada ah ugu dheceen Sheekh caan ahaa oo Tafsiirka ka aqrin jiray magaalada.
Sheekhan oo lagu magacaabi jira Sheekh Nuur Cismaan Bilaal ayay ka hor inta aysan dilin ku argagixiyeen gurigiisa arrintaasi kadibna si xun ayay u toogteen sida ay xaqiijiyeen dad ehelladiisa ah.
Nuur Baadiyow oo kamid ah maamulka degmada Wanlaweyn oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inuu ka waramo dhacdadan. Askarta Mareykanka ah ayaa kasoo duulay saldhigga ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee Ballidoogle.
Mareykanka ayaa ku andacoon jiray inuu dad gaar ah la dagaashan yahay laakin hadda waxaa muuqanaya inuu dagaal cad kula jiro cid walba oo diinta faafineysa.
Bulshada ku dhaqan degmada Wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose ayaa aad uga careysan dilka uu Mareykanku u geystay Sheekhoodii. Sheekhan ayaa sidoo kale macallin ka ahaa mid kamid ah iskuulada diiniga ah ee magaalada.
Dhacdadan ayaa waxay dib kuu xusuusineysaa hawl galladii ay Mareykanka iyo hogaamiye kooxeedyadu ka fulin jireen Koofurta Soomaaliya ka hor inta aysan soo bixin maxkamadihii islaamiga ahaa, hawl galladaas oo lagu beegsan jiray culimada looguna dhoofin jiray saldhigyada CIA-da ee Jabuuti.
Ummada Soomaaliyeed ayaa hawl gallada noocaas ah ugu magac dartay “Ashahaado la dirirka” waxaana muuqanaya in haatanna la beegsanayo qof kasta oo ahlu diin ah meeshuu doonaba haku noolaado amaba yuusanba dagaalamine.